Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » US Capitol complex wepụrụ n'ihi iyi egwu bọmbụ ahụ
Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụlọ HHS Humphrey
A kọrọ ihe iyi egwu bọmbụ ahụ n'ihe dị ka elekere 10 nke ụtụtụ na HHS Humphrey Building na 200 ngọngọ nke Independence Avenue na ogbe ndịda DC A chụpụrụ ụlọ ahụ.
Ụzọ isii gbara gburugburu US Capitol na Ngalaba Ahụike na Washington, DC ka emechiri taa.
Achụpụla ụlọ HHS Humphrey n'ụtụtụ Wenezde n'ihi egwu bọmbụ.
Enwere nnukwu ọnụnọ mmanye iwu gburugburu ụlọ US Capitol na HHS na Washington, DC.
Ndị uwe ojii emechiela okporo ụzọ niile dị na US Capitol na ngalaba ahụike US na Washington, DC taa maka egwu ogbunigwe a na-akọ na mpaghara ahụ.
Ụzọ isii, gụnyere Washington Avenue na Third Street, mechiri ka ndị uwe ojii Capitol nyochara ihe iyi egwu bọmbụ na Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị Ọrụ US na Independence Avenue - nke ndị uwe ojii mechirikwa.
Enwere nnukwu ọnụnọ ndị mmanye iwu na mpaghara ahụ. A hụrụ ndị ọrụ nchekwa obodo na mpaghara ahụ na-egbochi ụzọ na igwe mmadụ a chụpụrụ n'ọtụtụ ụlọ dị nso gbakọtara na mpụga US Capitol.
Sarah Lovenheim, onye enyemaka odeakwụkwọ HHS maka ọhaneze, wepụtara nkwupụta a:
"N'ụtụtụ a, e nwere ihe iyi egwu bọmbụ natara na Ụlọ Humphrey. N'ihi oke ịkpachara anya, anyị si n'ụlọ ahụ pụọ, ọ nweghịkwa ihe merenụ. Anyị na-enyocha ọnọdụ ahụ nke ọma na Federal Protective Service. Enwere ike ịduzi ajụjụ ọ bụla na Ọrụ Nchebe Federal."
HHS na-arụ ọrụ na Federal Protective Service iji nyochaa ọnọdụ ahụ, ka Lovenheim siri kwuo.
Ogige Capitol abụrụla ihe egwu na-abawanye ụba kemgbe Jenụwarị mgbe otu ìgwè puku kwuru puku ndị na-akwado onye isi ala Donald Trump wakporo nnọkọ nkwonkwo nke Congress.